Daawo Xasan D Aweys: Sh. Shariifow ragna ma haysid mabdana ma haysid ee dadka haku meel gaarin | Xaysimo
Home War Daawo Xasan D Aweys: Sh. Shariifow ragna ma haysid mabdana ma haysid...
Daawo Xasan D Aweys: Sh. Shariifow ragna ma haysid mabdana ma haysid ee dadka haku meel gaarin
Xasan Daahir Aweys ayaa Shiikh Shariif ku eedeeyey inuusan ka cabsaneyn in dadka nacaan, wuxuuna sheegay inay jiraan dad badan oo Shiikh Shariif ku qatalan.
Halkaan hoose ka daawo Muuqaalka Xasan Daahir Aweys